\_'बिजनेस वुमन\_' भनेको सुन्दा अप्ठ्यारो लाग्छ
असोज २६, २०७४| प्रकाशित २३:३४
एनआरएनको आठौं सम्मेलन यही शनिबारदेखि सुरु हुँदैछ। सम्मेलनले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्नेछ। र, त्यसका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम पनि जारी छ। आजै मात्र जमुना गुरुङले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छिन्। उनको उम्मेदवारीले दुई तर्फबाट चर्चा पाएको छ। पहिलो, करिब डेढ दशकको एनआरएन इतिहासमा महिलाद्वारा नेतृत्व गर्ने पहिलो प्रयास गरिएको छ। दोस्रो, उनी निवर्तमान अध्यक्ष शेष घलेकी श्रीमति पनि हुन्। घोषणा सभामै नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले गुरुङसँग कुराकानी गरेका छन्ः
तपाईंको जितको आधार के हो?
'इन्टेलेक्चुअल' र सही गलत छुट्याउन सक्ने एनआरएनका साथीहरुको क्षमताले मलाई जित दिलाउने छ। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा चार वर्ष म यसमा सहभागी भएको छु। त्यसमा पनि पछिल्लो दुई वर्ष चाहिँ आइसिसि सदस्यको रुपमा म प्रत्यक्ष सक्रिय भएँ। जसले मलाई एनअारएनए भित्रका धेरै कुराहरु जान्ने मौका मिल्यो। हुन त अरु साथीहरुलाई पनि यस्ता कुरा थाहा छ। उहाँहरुले मैलेभन्दा बढी थाहा पाउनुभएको हुनसक्छ। तर, यो संस्थाप्रतिको मेरो विश्वास, भावना र यसका प्रतिबद्धतालाई पूरा गराउने मसँग दृढ विश्वास छ। साथीहरुले त्यस कुरालाई मूल्यांकन गरेर मलाई मत दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यही नै मेरो जितको आधार हो।
तपाईंलाई शेष घलेको लिगेसीलाई क्यास गर्न खोजेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि!
त्यो भए त निकै राम्रो हुने थियो नि! तर म त्यसमा विश्वस्त छैन। खासमा मैले यस संस्थामा रहेर जति काम गरें, विशेषगरी भुकम्पका बेला मैले ग्राउण्ड जिरोमै गएर काम गरें। नेपाली दाजुभाइहरुलाई दुःख परेको बेला मल्हम लगाउन पाएँ, चिन्ने चिनिने मौका पाएँ। नाकाबन्दीको बेलामा पनि एक महिनासम्म काठमाडौंमा आएर काम गरें। त्यसले एनआरएनका साथीहरुको भावनालाई बुझ्न सघाउँछ।
मलाई 'बिजनेस वुमन' भनेको सुन्दा अप्ठ्यारो लाग्छ। मलाई विशेषगरी परोपकारतिर रुची छ। कसैको दुःख देख्नै सक्दिनँ। गएर सहयोग गर्न मन लाग्छ। म चार वर्षसम्म यो संस्थामा रहेर यस्तै काममा बढी सहभागी भएँ। यसले मलाई उत्प्रेरित गरायो। यसले मलाई उम्मेदवारी दिने निर्णयमा पुग्न सघायो पनि।
हामी लाप्राकको नमुना बस्तीमा पुगेका समयमा त्यहाँका अप्ठ्यारो र चुनौतीमा रहेर काम गरेको देख्दा हाम्रो संस्थापक अध्यक्षले भन्नुभयो– तपाईं र शेष घले संस्थामा नहुने हो भने यो प्रोजेक्ट पूरा हुन गाह्रो पर्छ। तपाईंहरु यसमा लागीरहनपर्छ भन्ने उहाँको कुरा थियो। यसले मलाई निकै उद्धेलित गराइरहेको थियो। एनआरएनको सहयात्री नभएका नेपालका साथीहरुले पनि समय मागेर खुट्टा ननिकाल्न र निकाले पछुताउनुपर्ने भनिराख्नुभयो। त्यसमा पनि तपाईं एकजना महिला भएको र एनआरएनको इतिहासमा महिला नेतृत्व नभएकाले अघि बढ्न घच्घच्याउनु भयो। र, तपाईंले गरिराख्नुभएको कामलाई यो संस्थाबाट निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने आग्रह भयो। त्यसरी अध्यक्षमा लड्ने निर्णय गरेको हुँ।
एउटी महिला विश्वव्यापी सञ्जाल भएको संगठनको नेतृत्व गर्ने सम्भावना नजिक हुनुहुन्छ। जित्नुभयो भने, तपाईंबाट नेपाली महिलाले के अपेक्षा गर्न सक्छन्?
विस्तृतमा चाहिँ पछि 'वर्क आउट' गर्न सकिन्छ। तर समग्र नेपालले नै एनआरएनबाट सिक्नुपर्ने जरुरी छ जस्तो लाग्छ।
नेपाली महिलाले तपाईंबाट के अपेक्षा गर्न सक्छन् भनेर बुझ्न खोजेको मैले!
मेरो जित नै नेपाली महिलाको निम्ति राम्रो उदाहरण बन्न सक्छ। तर केही कार्यक्रमहरु हामीले महिलाको निम्ति नै लक्षित गरेर कार्यान्वयन गर्नेछौं।
तपाईंले घाँस दाउरा बोकेरै यहाँसम्म पुगेको हुँ भन्ने गर्नुभएको छ। उम्मेदवारी घोषणा गर्दा महिला सशक्तिकरणको लागि उम्मेरदवारी दिएको भन्नुभयो। अहिलेसम्म घाँस दाउरा बोक्न बाध्य महिलाका निम्ति तपाईंले गर्ने केही काम हुनसक्छ?
त्यो त राज्यको जिम्मेवारी हो नि!
म अलिकति मेरो विगत सम्झिन्छु। हाम्रो घर माथि डाँडामा थियो। पानी लिन तीन किलोमिटर तल बेसीमा झर्नुपर्थ्यो। आमाले राति २ बजे उठेर गएर चारपाँच वटा गाग्री भरेर राखिदिनुहुन्थ्यो। अनि फर्केर आएर अरु काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई उठ्न कर गर्नुहुन्थ्यो। म चार बजेतिर उठथें। र आमाले भरेर राख्नुभएको गाग्री ल्याउँथे। अनि घाँस काट्न जान्थे। त्यसपछि बल्ल खाना खाएर स्कूल जान पाउँथे।
यदि म उहाँकै स्थितिमै भएको भए आज तपाईंले नाम पनि सुन्नुहुने थिएन। म त्यो अवस्थाबाट यहाँसम्म पुगे‌। उहाँहरुले मेरो जीवनलाई नै एउटा प्रेरणा मान्न सक्नुहुन्छ। त्यसले पनि उहाँलाई अगाडि बढ्न मद्दत पुग्छ।
एनआरएनमा महिला नेतृत्व भयो भने त्यो पुरुषले नेतृत्व गरेको भन्दा के कति कारणले फरक हुनसक्छ?
महिलाहरुमा धेरै विश्लेषणात्मक क्षमता हुन्छ। महिलाहरुको सोच्ने र निर्णय गर्ने क्षमता विशिष्ठ हुन्छ। त्यसले पनि यो संस्थालाई अझ राम्रो र प्रभावकारी बनाउने छ।